တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လိုချင်သော ၁၁ နှင့် မလိုချင်သော ၁၁
Posted by မေဓာဝီ at 11:11 PM
တောင်းပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ ကြီးမေကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေ
1/11/2011 11:42 PM
11.1.11 မှာ မမေ ပေးတဲ့ ဆုတွေ နဲ့ ပြည့်စုံစေဘို့ ကျိုးစားမယ်ဗျာ မိုးလင်း ကထဲက ပူလောင် ရလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တောင် ညစ်မိပါရဲ့
သူတော်ကောင်းတရားတွေများ မှန်ကန်လိုက် အေးချမ်းလိုက်တာ
1/12/2011 3:03 AM
ကောင်းလိုက်တာ.. ၁.၁၁.၂၀၁၁ အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ post လေးပါပဲ..
1/12/2011 5:16 AM
အဖိုးတန်တဲ့ စာလေးကို သဘောကျ နှစ်သက်မိပါတယ်
ကိုယ့်မွေးနေ့ ၁၁-၁-၁၁ နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ မွေးနေ့လက်ဆောင်လို့ သဘောထားပြီး သိမ်းထားချင်လို့ ကူးယူသွားပါတယ်။
ကျေးဇူး ညီမ မေ...း))
1/12/2011 5:43 AM
ကာမ ၁၁ ဘုံမှာ ကျင်လည်ကျက်စားနေကြမှတော့ မီး ၁၁ ပါး၊ မေတ္တာအကျိုး ၁၁ မျိုးကို တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ ရနေကြတာပါဘဲလေ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ပထမဈာန် ၁၁ ပါးကိုပါ ရအောင် အားထုတ်သင့်တယ်။
အခုလိုရေးထားတာလေးတွေ ကောင်း၏ ကောင်း၏။ သီလရှင်လူထွက်မလေးများလား အောက်မေ့ရတယ်။ ပညာကလဲ စုံပါ့။
ဗပာုသုတ ဖြစ်ဖွယ် ပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မမေဓာဝီ....။
1/12/2011 12:35 PM
တကယ်ကို ဖတ်သားပြီး သတိမူ မှတ်သားရမယ့် စာတွေပါ..။
သိပြီးတော့ မကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ အခါ...
ပူလောင်တဲ့၁၁ပါးထဲမှာ ကျင်လည်ခဲ့ ရတဲ့ ဘ၀တွေ များလှပါပေါ့လား............။
1/12/2011 4:12 PM
မလိုချင်တဲ့အထဲ ပိုက်ပိုက်တွေ ပါရင် ပြောပါ
မမေဓါဝီ ... :P
1/12/2011 9:40 PM
လိုချင်တာ ၁၁ပါးရဖို့ရော မလိုချင်တာ ၁၁ပါးကင်းဖို့ရော တစ်ခုတည်းသော တရားကိုကျင့်ဖို့ နည်းနည်းအချိန်ဆွဲနေမိတယ်..
တော်ကြာ ရုတ်တရက် သေသွားရင် ဘာမှ မပါဘဲနေဦးမယ်.
မမေဘလော့ဂ်ကို လာလည်မှပဲ ရှိသမျှမီးတွေ အကုန်ငြိမ်းတော့တယ်.
သေချာအောင် ဒီပို့စ်ကို မီးပိတ်ပြီးမှ ဖတ်တာ. :D
နေကောင်းလား မမေ. ကြီးပွားရေး.. စီးပွားရေး... ပညာရေး... ... ရေး၊ ... ရေး... အကုန်ပေါ့.